UNksz Tankiso Moso ese-Marion Island.Click here for English version
Ucwaningo lwesikhathi lapho kwaqala ukubumbeka izinkanyezi emkhathini kwenze ukuthi uNks Tankiso Moso aphase iziqu ze-MSc in Applied Mathematics ngamalengiso. ‘Kuhle ukwazi ngomlando womhlaba nezikhathi zawo ngezinto ezithinta nesizibona mihla namalanga,’ kusho yena.
Ucwaningo lwakhe, olusihloko sithi Low-Frequency Observations of the Radio Sky from Marion Island, lubhekwe ngoSolwazi Cynthia Chiang no-Kavilan Moodley.
UMoso ucwaningo lwakhe ulwenze e-Marion Island, okuyilapho ama-aerial akhe ebekhona. ‘Sinethuba elilodwa ngonyaka, okwenza kube nenselelo ukusebenza khona kodwa i-Marion Island inezimpawu ezimqoka eziyinsika ocwaningweni lwethu,’ kuchaza yena. ‘Ucwaningo kuma-frequency aphansi aluvamile kanti zimbalwa izindawo eziluvumayo,’ kusho uMoso.’
Ocwaningweni lweziqu zakhe zobunjiniyela uNksz Moso wayegxile kubunjiniyela be-radio frequency nobe-microwave. ‘Ngenkathi umngani wami engazisa nge-National Astrophysics and Space Science Programme (NASSP), yangithatha ngoba indlela ayichaza ngayo yangenza ngabona ukuthi uma ngigxila kwi-Instrumentational Astrophysics, ngizokwazi ukusebenzisa ulwazi lwami lwezobunjiniyela ngikhule kwisayensi nobunjiniyela,’ kusho uMoso.
UMoso uchaze ubumqoka bendima agxile kuyona. ‘Luncane ucwaningo olunjengalolu olwenziwe, ikakhulukazi nge-frequency ephansi. Sizama ukuthola okwakukhona kodwa okungasekho nge-frequency ephansi, sisebenzisa ubuchwepheshe namasu amasha ukuqoqa ulwazi.’
UChiang uluncome kakhulu ucwaningo lukaNksz Moso wathi. ‘Ngiswele amazwi okuncoma ucwaningo oluhle lukaTankiso lwe-MSc,’ kusho yena. ‘Wenze into engakaze yenziwe e-Marion Island, engenye yezindawo ezinzima emhlabeni. Akuyona into encane lena futhi akuyona into yamagwala! Bekumnandi ukusebenza nomuntu onethalente njengoTankiso kanti into ayenzile izokhuthaza nabanye abantu.’
UMoso ubonge bonke abamesekile ngenkathi efunda. ‘UNkulunkulu phambili. Abaphansi nemithandazo yabazali bami kungithwalile ngezikhathi zobunzima. Ukwesekwa engikuthola emndenini wami nesithandwa sami ngikubonga kakhulu. Ngingabalibali abangani bami nabalingani bami. Ngifisa ukubonga umeluleki wami uChiang owangelekelela ukuhlela nokwenza ucwaningo lwami lwe-Onazi nolweMastazi. Ngibonga uSolwazi Siva Venkataraman (uMqondisi we-NASSP e-UKZN) noSolwazi Jonathan Sievers ngokungeseka.’
UMoso ubonge uhambo lwakhe lwezifundo zeMastazi. ‘Akubanga wuhambo olulula kodwa lungiqinise ukhakhayi.’ Uhlose ukuqhubeka nohambo lokufunda, enze iziqu zobudokotela. UNksz Moso ucabanga ukuthatha ithuba lokuyohlala unyaka e-Marion Island. ‘Ngizobona ukuthi amadlelo aluhlaza angiholela kuphi,’ kusho yena.
‘I-UKZN ingenye yamanyuvesi ahlonishwayo ezweni kodwa okumqoka, wuthando locwaningo lwami olungenze ngaqhubeka emva kokuqeda i-Onazi kwi-BSC. Yithuba elingandile ukugxila kwisayensi nezobunjiniyela nokuhloma ngamajazi akhona.’